नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा खेल,बाड गरेपछि ग्राण्डी अस्पतालमाथि कार,बाही ! – ताजा समाचार
नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा खेल,बाड गरेपछि ग्राण्डी अस्पतालमाथि कार,बाही !
काठमाडौं, १२ असोज । नवजात शिशुको उपचारमा ग,म्भिर लाप,रबाही गरेको पाइएपछि राजधानीको धापासी स्थित ग्राण्डी अस्पताललाई कार,बाही सिफारिस गरेको छ ।
गत जेठमा सञ्जिव चन्द्र न्यौपाने र एकता न्यौपानको पहिलो सन्तानको जन्म नै ग्राण्डी अस्पतालमा भएको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकहरुले ‘पैसाकै लागि’ ५ पटक अपरेशन गरेको पीडि,तको आरो थियो ।
गत जेठ २ गते पी,डित सञ्जिव न्यौपानेले मेडिकल काउन्सिलमा उ,जुरी गरेका थिए । उजुरीका आधारमा मेडिकल काउन्सिलले डा. गणेश राईको नेतृत्वमा छा,नबीन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले लामो समय लगाएर गरेको छानबीनबाट ग्राण्डी अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोध्ने र उपचारमा चिकित्सकलाई कार,बाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘निज सञ्जीव चन्द्र न्यौपानेको नवजात शि,शुको सोही अस्पतालमा शल्यक्रि,याद्वारा जन्म भई लामो समयसम्म उपचार गरेको र उपचारको क्र,ममा विभिन्न चिकित्सकहरुको टीमबाट धेरै क,मी, कम,जोरीहरु भएको देखियो,’ राई नेतृत्वको समितिले गरेको छानबीन समितिको निष्कर्ष छ,‘विशेषगरी नवजात शिशुलाई उपचारमा अतया,धिक मात्रामा धेरै पटक पारा,सिटामोल औषधी दिनु गम्भि,र त्रु,टी देखियो ।’
त्यस्तै छानबीन समितिले मस्ति,ष्कको भेन्ट्राइकल र सिवाईएसटीको आकार प्रकारबारे रेडियोलोजिष्ट र उपचाररत न्युरो सर्जन चिकित्सकका बीच बुझाईको अत्यन्तै अभाव रहेको निष्क,र्श निकालेको छ ।
त्यस्तै गरी अस्पतालले विरामी पक्षलाई शिशुको स्वास्थ्य अवस्था,को विषयमा एथेष्ट जानकारी नदिई ला,परबाही गरेको समेत समितिको निष्कर्ष छ । ‘विरामी पक्षले उपचार तथा उपचारमा भयरहेको विविध प्रक्रिया र तयसबाट सृजित अवस्थाको विषयमा पाउनुपर्ने एथेष्ट र यथार्थ जानकारी पाउन सकेको देखिएन भने उपचारमा संलग्न विभिन्न जिम्मेवारीका चिकित्सकहरुका बीचमै बुझाईमा एकरुपता नदेखिनुले चिकितसकहरुको आपसी समन्वय, काउन्सेलिङ, ब्रिफिङमा अत्यन्तै चुकेको देखिन्छ,’ समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ,‘मस्तिष्कको भिडियो एक्सरे गरेपश्चात रेडियोलोजिष्टहरुका अभाव अनुसार सिटी अथवा एमआरई गर्न ढिलाई भएको देखियो । विरामीको उपचार गर्दै गरिरहँदा पनि सुधार नआएपछि रोगको अवस्था र जटीलताका बारे समयमै पहिचान गर्न बिरामीको सिटी वा एमआरअई अत्यन्तै जरुरी पर्दछ, जुन समयमै गरिएको देखिएन । जसले गर्दा रो,गको जटीलताको समयमै पहिचान गर्ननसक्नु यो घटनाको मुख्य कमजोरी हो ।’
ग्राण्डी अस्पतालले शिशुको अपरेशनका लागि छै,ठौँ पटकसम्म तयारी गर्दा सम्म विरा,मीको आफन्तलाई खबर नगरी लापरबाही गरेको समितिको निष्कर्श छ ।
पी,डित परिवारले पटक पटक गरी ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रक,मड अस्पताललाई बुझाएका थिए ।
‘उपचारको यी अवस्थाहरुको बीचमा पटक–पटक शिशुको टा,उकोको शल्यक्रिया भएको, विरामी पक्षले उपचारप्रति आशा जगाएर बसेको तरपछि विरामीको अवस्था अत्यन्त ,ना,जुक हुँदै जाँदा पनि विरामीसँग उचित परामर्श र सहमति नलिई शल्य,क्रियाको (छैठौँपटक) तयारी गरेको देखिँदा अस्पतालको तर्फबाट मानविय संवेदनशीलतामा पनि सावधानी अपनाएको पाइएन,’ समितिको निष्कर्शमाउ उल्लेख छ,‘काउन्सिलको आचारसंहिता विपरितको कार्य भएकोले उपचारमा समलग्न न्युरो शल्य चिकित्सक एवं रोग सँग सम्बन्धित चिकित्सकको टीम तथा स्वास्थ्यर्मीहरुलाई स्पष्टिकरण पत्र काट्ने निर्णय गरियो । गैरचिकित्सक स्वास्थयकर्मीलाई चिजहरुको स्वास्थ्यकर्मीएको उपाधी दर्ता हुने सम्बन्धित काउन्सिलमा कारबाहीको सिफारिस सहित पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो । साथै उपचारको क्रममा भएको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय कमी, कमजोरीहरु पनि प्रशस्तै देखिएकोले अस्पताल व्यवस्थापनलाई समेत स्पष्टिकरणको पत्र काट्ने निर्णय गरियो ।’
को–को डाक्टरमाथि का,रबाही ?
मेडिकल काउन्सिलको छानबीन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ग्राण्डी अस्पतालको एनआईसियु, न्युरो र पिआइसियु विभागमा कार्यरत अधिकांश डाक्टर कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । एनआइसियुमा डाक्टरहरु अन्जु डंगोल, रमिता श्रेष्ठ निमा श्रेष्ठ कार्यरत थिए । त्यस्तै पिआइसियुमा कार्यरत डाक्टरहरु सञ्जयराज थापा र डा. अमित घिमिरेमाथि कारबाही हुने भएको छ ।
न्युरोमा कार्यरत रहेका डा. अमित थापा र डा. रुपेन्द्र बहादुर अधिकारीमाथि पनि काउन्सिलले का,रबाही गर्ने भएको छ ।